Jumma Mubarak Pic 2018 Images Amin'ny New Collection - Jumma Mubarak 2018 : Zava-dehibe, roa, fitahiana, ः ades, ary Quran
Admin Aprily 19, 2018 jumma Mubarak sary Tsy asian-teny
Salama ry mpikambana
Alhamduillah jummah iray hafa ny tompon-andro rehetra efa tonga again.and indray izahay miaraka aminao amin'ny jumma Mubarak sary
Ry Allah. Mivavaka aho mba na iza na iza mamaky ity lahatsoratra ity dia hanana ny fampiononana,fifaliana,fandriampahalemana,fitiavana,ary guidance.I mety tsy mahalala ny fahoriany,fa niaro antsika foana do.please.“Ameen”.
eto tonga ny andro feno fitahiana sy ny maro hafa sawab dia mari-pankasitrahana ny Allah.
angamba dia mahazo mari-pankasitrahana bebe kokoa ho an'ny fotoam-pivavahana amin'ny tsitoha Allah amin'ny day.we sarobidy io dia ny mpanara-dia fivavahana iray izay mandrara ny famoizam-po.
isika no Oma ny mpaminany izay tsy very fanantenana momba ny hoavy na inona na inona ny toe-javatra.
“Rasulallah S.A.W hoe: “andro tsara indrindra amin'ny herinandro izay ny masoandro miposaka amin'ny,no andro ny jum'ah.”
“ny alin'ny jum'ah “ny alina sy ny zoma teo Alakamisy”Mahasambatra kokoa sy ny andro jum'ah no fitahiana.
maha Silamo no kokoa fotsiny ny fandehanana any amin'ny Masjid “Andriamanitra”tsy tiany ny tsara fotsiny ny mpanatrika.
Alhamdolillah amin'izao fotoana izao dia jum'ah
Andao hanao ho silamo rehetra dua Oma
rehetra ny fianakaviana sy ny namana
Manantena aho fa ho lehibe
Enga anie Allah manaiky ny du'as amin'ny fitahiana izany andro Ameen
Ry Almight! hitarika antsika ho amin'ny lalana marina!
Ya Allah mifoha ahy
talohan'ny tsy hifoha
” Tsy ho very fanantenana sy ny fahatokiana ny herin'ny dua,
Allah no hanome anao ny zavatra rehetra tianao raha mbola fa tsara ho anao”
manana faran'ny herinandro lehibe InshaAllah.
Aoka ho tahaka ny vonin'ny
izay manome ny ankasitrahana ho na dia ny tanana
izay hanorotoro azy.
Mivavaha dia mahagaga fifanakalozana, ianao famerenana ny ahiahy ny Allah sy ny “Andriamanitra” handsover ny fitahiana ho anao foana fotsiny ny vavaka Jumma Mubarak.
Jumma Mubarak Latest Best Images,Sary 2018
Desambra 10, 2017 2 Comments
Desambra 20, 2017 Tsy asian-teny
Febroary 26, 2018 Tsy asian-teny
Febroary 16, 2018 Tsy asian-teny